Maitiro ekugovana Mhenyu Mapikicha pane iOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekugovana Mhenyu Mapikicha pane iOS 9
Rarama Mapikicha chave chimwe chekuvandudza kunoshamisa kweiyo nyowani iPhone 6s uye 6s Plus. Pamusoro pekuvandudzwa kwekamberi nekamberi kamera, uye mukana wekurekodha vhidhiyo ye4K, basa idzva iri rakawedzerwa, izvo zvinoita kuti zvidimbu zvidimbu zvidimbu zvidiki zvevhidhiyo zvine hupenyu kana 3DTouching pachiratidziro chePhones nyowani. Kunyangwe iyi mifananidzo inogona kungotorwa chete paazvino maPhones, ehe vanogona kugoverwa nechero chishandiso chine iOS 9, kunyangwe neMacs, asi chenjera kuti unozviita sei nekuti kwete chero nzira inoshanda.
Kana iwe usinga govane Live Live uchishandisa chero yedzinotsigirwa nzira, izvo zvaunotumira zvinongova zvakajairika pikicha, muJPG fomati. Kuti uchengetedze fomati yayo yakasarudzika iwe unofanirwa kuigovana uchishandisa chero yeiyi nzira:
AirDrop, iyo sisitimu yekugovana mafaira zvisina waya nechero imwe iOS kana Mac OS X chishandiso chinoitsigira. Ratidza nzvimbo yekudzora pane chakanangwa mudziyo, shandisa AirDrop kana iwe usina iyo inoshanda, uye mumufananidzo wako sarudza iyi nzira yekuigovana.
Yakagovaniswa Mapikicha: Gadzira yakagovaniswa pikicha album muICloud uye vese vashandisi vane mukana kune iyo albam vanozokwanisa kuona iyo Mhenyu Mapikicha pese paunoisa iwo kwairi.
iMessage: Apple's pakarepo mameseji application inobvumidza Mhenyu Mapikicha kugovaniswa pakati peaIOS zvishandiso uye neMac komputa
Idzi chete nzira nhatu dzinochengetedza hunhu hwemifananidzo iyi. Kana iwe uchizviita uchishandisa chero imwe nzira, senge kuburikidza neemail, iyo animation icharasika. FaceBook uye zvimwe zvinoshandiswa zvinogona kubvumidza aya marudzi emafaira, asi izvi handizvo zvazvino.
Isu tinoomerera kuti aya mafoto inogona kuonekwa pane chero chinhu cheIOS asi chero bedzi uine iOS 9 yakaiswa. Izvo hazvipindirane, zvirinani izvozvi, nemidziyo yeApple, sezvo ivo vasingatsigire chero yeimwe nzira nhatu dzinobvumidza kugovana aya mafaera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekugovana Mhenyu Mapikicha pane iOS 9
Dzidza nezve izvo zvitsva zveiyo QuickType keyboard ye iPad muIOS 9
WhatsApp inoronga kuunza akawanda matsva maficha munguva pfupi